TUURYARE: “Waxaan rajeynaa wixii Baydhaba ka dhacay inaysan ka dhicin Dhuusamareeb” – Maanta Online
TUURYARE: “Waxaan rajeynaa wixii Baydhaba ka dhacay inaysan ka dhicin Dhuusamareeb”
Jan. C/raxmaan Maxamed Tuuryare oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud oo dhowaan ay tageen ciidamo ka tirsan dowladda Itoobiya taasi oo siyaabo kala duwan loogu fasirtay in dowladda federaalka damacsan tahay inay halkaasi ka sameyso wixii ka dhacay magaalada Baydhaba xilli ay ka socotay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Musharax Tuuryare ayaa sheegay inay dalka joogaan ciidamo ka socda dalka Itoobiya oo ka tirsan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, isla markaana dhaqdhaqaaq kasta ee ay ka sameynayaan gudaha dalka uu yahay mid ka soo baxay Midowga Afrika.
“Waxaan rajeynayaa wixii Baydhaba ka dhacay inaysan ka dhicin Dhuusamareeb” ayuu yiri Jan. Tuuryare oo u waramayay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ka howlgasha, wuxuuna in haddii ciidamada Itoobiya ee tegay Dhuusamareeb aanay ka tirsaneyn AMISOM dowladda looga baahan yahay inay caddeyso.
Musharax Tuuryare ayaa sheegay inuu isagu wax welwel ah ka qabin doorashada ka dhaceysa magaalada Dhuusamareeb bacdamaa dadka wax dooranaya ay Soomaali yihiin, isagoona ka digay in la sameeyo wax sharciga ka soo horjeeda isla markaana aan la abuurin xaalad aan ka jirin magaaladaasi.
“Ciidamada Itoobiya ee la geeyay Dhuusamareeb waxay dalka u joogaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab wax welwel ahna kama qabo, balse hadii sida ay sheegayaan saaxibadey ku soo baxdo wadanka ayay gabood fal ku tahay” ayuu yiri Jan. Tuuryare oo sheegay inay su’aalo ka qabaan howsha guddiga doorashooyinka Galmudug.
Waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka xubnaha ka tirsan ay yihiin dhallinyaro firfircoon uuna ka rajeynayo inay si cadaalad ah ku shaqeyn doonaan, wuxuuna farriin adag u diray ururka Ahlu Sunna oo haatan wadahadallo kula jira Dowladda federaalka, isagoona ku booriyay in haddii ay waayaan wixii ay doonayeen ay u tanaasulaan shacabka Galmudug si ay u dhacdo xalaal ah.
← From a Stall in San Diego, a Somali Tailor Weaves a New Life
Janaraal ka tirsan ciidamada Milateriga oo lagu dilay Muqdisho →
Ammaanka Maxamuud Sayid Aadan oo ay la wareegeen ciidamo Kenyati ah (Waa maxay sababta?)